Inhlanganiso yeAction Plan Isungula Uhlelo Lokuthelelezela Kusetshenziswa iSolar
Omunye wabakuhlelo lwe Action Plan Project
Inhlanganiso ezimeleyo eye Action Plan sisungule uhlelo lokulima ngokuthelezela kusetshenziswa amandla elanga iSolar.
Loluhlelo luhlose ukuthuthukisa abalimi abangomama emaphandleni eGwanda.
Abe Action Plan bathi bazafaka imali eyedlula ingxenye yezigidi zamadola akwemelika i $583 000 ezancedisa abalimi abangomama abafika amakhulu amahlanu.
Loluhlelo olubizwa ngokuthi Renewable Energy Empowering Women Farmers REEWF luzaqhutshwa emawadini amathathu eGwanda abalisa uWard 11 eNtalale, uWard 12 eGungwe kanye lakuWard 13 Sengezane okuzindawo ezihlezi zibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Ekhuluma lapho kusungulwa loluhlelo edolobheni leGwanda uNkosazana Melody Makumbe umqondisi wenhlelo zeAction Plan uthi loluhlelo luzancedisa abalimi ukuthi bavule izivande ezizasebenzisa amanzi aponthswa ngamandla elanga iSolar.
“Abalimi laba ngabalimi esizabancedisa ukuthi balungise izingadi ezizampompa amanzi zisebenzisa amasolar, sizasebenza lengadi ezifika 9.Umsebenzi lo ngumsebenzi olemali efika yona $583 000 yiyo imali ezahamba ebadaleni ukuyabancedisa ngoba injongo yomsebenzi lo yikuphakamisa omama kusetshenziswa indlela zokupompa amanzi kusetshenziswa amasolar,” kutsho uMakumbe.
UNkosazana Thandekile Dube obona ngokuqhutshwa kwenhelo zeAction Plan uthi loba nje loluhlelo luhlose ukusiza kakhulu omama, obaba abasoze bavalelwe phandle.
Kutsho uDube: “75% omama bethu kumele bebe yi three quarter yeproject yethu sonke so hanti sithe silabantu abayi 990m so 75% kumele kubongomama, i25% ingaba ngobaba loba omama bebanengi obaba abasali phandle, ngendlela esisebenza ngayo yindlela ezimbili ezihamaba emaceleni ezihlangana kweyinye indawo.Obaba labo sizasebenza labo okuthiwa yiGender mainstreaming ukuthi labo babone ukuthi omama bayazuza amathuba afanayo labobaba.”
Ukhansila kaWard 12 uMnu Poko Linyane uncome inyathelo elithethwe yiAction Plan lokusebenzelana labomama esithi yibo abaziphetheyo emakhaya.
“Ngibona ingani siconsider igender ngoba omama yibo kakhulu abakhangela ezelogistics emakhaya,” kutsho uLinyane.
Omunye njalo ukhansila uMnu Coaster Ndlovu okaWard 11 eNtalale uthi inyathelo lokusebenzelana labomama lilungile ngoba bebevele bencindezelwa phambilini.
“Iminyaka leyi eyedlulileyo bebengatholiswa amathuba kwezomnotho kade behlaliswa nje emakhaya so now sebezanikwa amathuba bephumele egcekeni benze ama business, kutsho uNdlovu.